Gunyana 30, 2016
Zvimwe Zvizvarwa ZveZimbabwe Zvokurudzira Mutungamiri WeNyika VaRobert Mugabe Kuti Vasiye Basa
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvaive pakuratidzira kwakaitwa muNew York pakauya mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe kumusangano weUnited Nations, zvirikukurudzira kuti VaMugabe vasiye basa sezvo varikuritadza. Ngatinzweyi hurukuro yakaitwa naMarvellous Mhlanga-Nyahuye weStudio 7 nezvizvarwa izvi.
Chimwe Chizvarwa CheZimbabwe Chinoti Chicharamba Chichiratidzira Kusvika Zvinhu Zvanaka
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chaive pakuratidzira kwakaitwa muNew York pakauya mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe kumusangano weUN, VaTatenda Musanhi, vanoti vacharamba vachiita izvi kusvika zvinhu zvasanduka munyika. Ngatinzweyi hurukuro yavakaita naMarvellous Mhlanga-Nyahuye weStudio 7.
Gunyana 29, 2016
Hurukuro naDr Patson Dzamara
Bhanga Repasi Rose reWorld Bank Rinoti Harisi Kuzoita Nhaurirano dzeMari neZimbabwe
Murwiri wekodzero dzevanhu Doctor Patson Dzamara vanoti vari kufara nekuwana mhinduro kubva kubhanga repasi rose reWorld Bank, yekuti harisi kuzopinda munhaurirano neZimbabwe pamusoro pechikumbiro chayo chekuti ikwereteswe mari.
Gunyana 28, 2016
Gurukota Rekushanyirwa Kwenyika VaWalter Mzembi Votsvaga Chigaro Chekutungamira UNWTO
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika VaWalter Mzembi vanoti vari mushishi rekutsvaga rutsigiro rwekuti vasarudzwe kutungamira sangano reUnited Nations World Tourism Organisation. Dr Mzembi vaudza Marvellous Mhlanga-Nyahuye weStudio 7 kuti vakawana basa iri vachasiya chigaro chavo muhurumende.
Gunyana 26, 2016
VaMugabe Voshorwa neMashoko Avo eKushora United Nations
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kushorwa zvakanyanya nevanhu vakawanda munyika nemashoko avo nemusi wemugovera ekuti nyika dzemuAfrica neAsia dzakagadzirira kubuda mugungano reUnited Nations kana Security Council isina kuvandudzwa.
Gunyana 22, 2016
Zvizvarwa zveZimbabwe muAmerica Zvinoti Kuratidzira Kwakabudirira
Mumwe wevakanga vachironga kuratidzira uku, Muzvare Savanna Madamombe vanoti izvi zvakapa mukana kuvana veZimbabwe vakawanda wekuona kuti vanokwanisa kutaura zvavanoda.
Gunyana 21, 2016
VaMzembi Votsvaga Rutsigiro rweKutungamira UNWTO muAmerica
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika VaWalter Mzembi vari muNew York kuUnited Nations nemutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vachiyedza kutsvaga rutsigiro rwekuti vaite munyori mukuru wesangano reUnited Nations World Tourism Organization kana kuti UNWTO.
VaMugabe Voshora Nyaya yeKutemerwa Zvirango kuUnited Nations
Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vakataura nemusi weChitatu pamusangano wechimakore makumi manomwe nerimwe weUnited Nations General Assembly muNew York vachiti zvirango zvakatemerwa nyika ndizvo zviri kukanganisa zvirongwa zvekuvandudza hupfumi.
Gunyana 20, 2016
VaObama Votaura Kekupedzisira kuUnited Nations, Uko VaMugabe Votarisirwa Kutaura neChitatu
Mutungamiri wenyika yeAmerica VaBarack Obama nemusi weChipiri vakataura kekupedzisira pamberi pesangano reUnited Nations General Assembly.